Outside Garden Lights - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Outside Garden Lights)
Sensor 75W Pole Light Fixture for Street Garden Atụmatụ: 1. duru Post kacha elu ọkụ Ịchekwa ikike, gburugburu ebe obibi, Ọ dịghị UV ma ọ bụ IR radiation. 2. na- ebute ebe a na-ahụ maka ogwe ọkụ ihu -egwu, mgbochi mmiri, enweghị nchapụ, ọ dịghị ọkụ, na-echebe anya gị. 3.N'iko siri ike ma kwụsie ike, ọ dịghị ụgwọ...
Ebe a na-agbanye ntụpọ maka okporo ámá Street Yard Garden
Nke a bụ 150w Daylight Garden Pole Light 18000lm bụ nnọchi anya maka 400W HID ma ọ bụ HPS Fixtures. Zọpụta ike, ego, na oge site na-eme ka ọkụ ọkụ gaa na ọkụ. Na 150 Watts na ọnụ ọgụgụ lumen nke 19500, ogige ntụrụndụ, ebe ndị na-adọba ụgbọala, ebe egwuregwu na n'okporo ámá ga-anọgide na-enwe nchebe ma na-egbuke...
Bbier 100w Ìhè Uhie Ogige Uhie 13000lm na -egbukepụ egbukepụ ọkụ na-arụ ọrụ 130lm / watt, dochie 250W MH / HID / HPS. Nke a Ìhè Garden osisi Light 100w nwere ezi heatsink imewe gosiri maka 50000 awa nke ndụ. Nke a Ìhè Garden osisi Light 13000lm dabara MEE 2-3 / 8 inch na 3 inch osisi mfe iji wụnye na-adọba ụgbọala...
Outside Garden Lights outside garden lights Led Garden Light Posts 75W Post Garden Light Post Garden Yard Light 20W Led Garden Light UK outdoor solar garden lights Garden Light Dubai